Ideal chalet yomndeni enkulu ngasechibini
"I-Le Neptune" iyi-duplex mountain chalet (abantu abayi-6) ezojabulisa imindeni emikhulu ethanda imvelo, ezolile futhi efuna indawo yokuhlala esezingeni.
Itholakala endaweni yokuhlala yamaholide eCabane Verte, ogwini lwaseLac des Settons nasenkabeni yeMorvan PNR!
Imiswe ekseni ephakathi kweParis neLyon kanye no-1h30 ukusuka e-Dijon nase-Nevers, iyindawo yokuthula etholakala endaweni efanele.
I-chalet entsha yokhuni enhle kakhulu (eyakhiwa ngoDisemba 2020)! I-Insulated 4 zonyaka, uzofakwa ngokunethezeka ehlobo nasebusika. Phansi phansi uzothola igumbi lokuhlala elikhanyayo elinekhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokudlela kanye negumbi lokuhlala eline-tv nombhede wosofa, ikamelo lokulala eli-1 elinombhede ophindwe kabili, igumbi lokugeza eli-1 nendlu yangasese e-1 ehlukene. E-mezzanine, ikamelo lokulala elingu-1 elinemibhede emi-2 engahlanganiswa, ikamelo lokulala eli-1 elinosofa ongu-1 oguquguqukayo kanye nendlu yangasese ehlukile.
Ithala elihle elinefenisha enkulu yasengadini, izihlalo zamadekhi zabo bonke kanye ne-barbecue! Ilungele umndeni noma iqembu labangane abangafika kwabangu-8.
•Inani lamagumbi: 4
•Igumbi lokulala 1: 1 umbhede ophindwe kabili 140x200 cm
•Igumbi lokulala 2: Imibhede engu-2 yabantu abangashadile engu-90x200cm engahlanganiswa
•Igumbi lokulala 3 (mezzanine): 1 umbhede usofa
•Igumbi lokuhlala elinekhishi elihlome ngokuphelele (isiqandisi esikhulu, ihhavini, ihhabhu lokungeniswa, umshini wokuwasha izitsha, njll.) nendawo yokudlela kanye nendawo yokudlela.
•Igumbi lokuhlala elinomabonakude nosofa oshintshwayo
•Igumbi lokugezela elineshawa, iyunithi eyize kanye neWC
•Izindlu zangasese ezi-2 ezihlukene
• Ithala elifakwe ngokhuni elinefenisha enkulu yasengadini, izihlalo zamadekhi kanye nezoso
•Indawo yokupaka yangasese
•4 amapuleti okungenisa kanye nohhavini
•Ifriji enkulu efrijini, umshini wokugeza izitsha, i-microwave, i-coffee maker, iketela, i-toaster, isomisi sezinwele
• Itafula lehlathi kanye nezoso
Le ndawo itholakala enhliziyweni yepaki yemvelo iMorvan, ogwini lwaseLac des Settons: woza uzogcwalisa amabhethri akho futhi ujabulele ukuzola okukhona!
Itholakala eduze kwamadolobhana aseMoux-en-Morvan naseMontsauche-les-Settons, eduze kwaseSaulieu, idolobha laseBernard Loiseau, ne-Autun, idolobha elinezinsalela eziningi zamaRoma.
Imibhalo yabavakashi iyatholakala nezeluleko zemisebenzi yakho endaweni yokwamukela izivakashi.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho, ithimba lezezindlu lingasetshenziswa nganoma yisiphi isidingo noma umbuzo. Endaweni yokwamukela izivakashi noma e-Bistrot, uyohlala uthola othile ongakwazisa, noma uma kuba nenkinga.